Chinja Ubuntu 16.04 kupinda Windows 10 neChaletOS 16.04 | Linux Vakapindwa muropa
Chinja Ubuntu 16.04 kupinda Windows 10 neChaletOS 16.04
Izvi ndizvo zvinoita shanduro nyowani yeChaletOS 16.04, zvichibva paUbuntu 16.04 LTS uye nechitarisiko chinoedza kutevedzera Windows 10
Dejan Petrovic achangobva kuzivisa kuwanikwa kweshanduro nyowani yeChaletOS, kunyanya iyo vhezheni Chalet OS 16.04 izvo zvatatova nazvo zvekurodha pasi.
ChaletOS 16.04 yakavakirwa paUbuntu 16.04 (saka manhamba anoenderana) uye chaizvo Iyo Ubuntu yakashandurwa kuti ifanane neWindows 10 inoshanda sisitimu, chimwe chinhu icho kunyangwe chisiri kuwana zvachose, kana vakawana sisitimu yakafanana nechitarisiko.
Iyi vhezheni itsva zvakare inoteedzera Ubuntu kana zvasvika pakutsigira, kugovana rutsigiro rweLTS seUbuntu 16.04, zvakare kuvimba neiyo kernel, zvakare inogara-kwenguva refu rutsigiro.
Nezve kutaridzika kwakafanana neWindows 10, ChaletOS inowana ichi chitarisiko uchishandisa iyo Gnome desktop pamwe chete neakateedzana eGTK2 uye GTK3 matehwe, pamwe neyakajairika icon pack.
Kunyangwe vazhinji vashandisi veLinux vangawana zvisina musoro kutevedzera kutaridzika kweWindows (nekuti ndosaka iwe ukaisa Windows), ine chikonzero chekuve. Vamwe vashandisi vanga vachishandisa Windows t kwemakore mazhinjiIvo vanotya kuisa Linux nekuda kweshanduko huru iyo inosanganisira, saka kuisa linux system inoita kunge Windows kunogona kuita kuti shanduko ive nyore.
ChaletOS zvakare yakanaka kuisa munzvimbo dzekudzidzisa, kuitira kuti vana vakakurira neWindows vanogona kutora matanho avo ekutanga muLinux vasina matambudziko kana kutya. Kana vachinge vajaira kuChaletOS, vanogona ikozvino kuenda kune mamwe masisitimu anoshanda ne linux, ngatitii yakachena uye yechinyakare.
Zvingave sei neimwe nzira, iyo inoshanda sisitimu inouya mune ese 32-bit uye 64-bit shanduro. Kuti utore mifananidzo yeIO yesisitimu ino, tichazviita kubva kune yayo yepamutemo peji clicking here.
Zvakanaka ... Iwe unofungei nezve ChaletOS? pfungwa chaiyo kana pachinzvimbo iwe unofunga hazvina kufanira hurongwa hunoteedzera iyo Windows interface?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Chinja Ubuntu 16.04 kupinda Windows 10 neChaletOS 16.04
Robert Barajas akadaro
Pindura kuna Robert Barajas
Chokwadi zvakakwana, ndiyo XFCE.
Ini ndinofunga zvakanaka, chero munhu anofarira Windows anoshandisa Windows, hazvina musoro kuisa imwe OS wozoishongedza zvakafanana.
Handifunge kuti kune vazhinji vashandisi vanofarira kugoverwa kwakadai, pamwe ndakanganisa ...
Zvinoenderana nekushandisa iwe kwaunoda kuipa. Semuenzaniso, mune rangu basa, nekuda kwezvikonzero zviri pamutemo tinoshandisa Linux nekuti ndeye mahara software, nekuti win10 yaizove nemari inodhura kwazvo (maLayisensi gumi nemaviri). Saka iyi sarudzo inowira munzira yeavo vasina kujairira iyo linux interface.
Mariano Bodeán akadaro
Kune avo vasina kujaira kune dzimwe nharaunda uye vane hushoma kana vasina hunyanzvi hwemakomputa, kushandisa chimwe chinhu chakadai kungareva kushandisa distro kana kusaishandisa uye kuenderera neMS. Ini ndangobva kuisa amai vangu pa desktop yavo ye ubuntu nesinamoni uye dingindira rakagoneswa kwazvo, zvitende kana kwete, mushure menguva yekuzvishandisa ndega ma microseconds ndakakanganwa kuti yanga isiri win10 :), sarudzo dzese dzinoshanda kwandiri .. ! kwaziso kubva kuArgentina! (Zvino zvandiri kufunga nezvazvo, ini handizive kunobva varinux veLinux)
Pindura Mariano Bodean
Klaus Schultz akadaro
Zvakanaka, ini handioni kufanana ne Windows 10 chero kupi ... Kune rimwe divi, kumisikidza iyo GNU / Linux kugovera uye kuipa iyo chitarisiko cheyakatsaurwa sisitimu seimwe yeMicrosoft kana Apple zvinoita kunge zvisina musoro, sezvo makambani maviri ane ruzivo rwakakwana kududzira zvinotarisirwa nemushandisi zvakajairika kubva kudesktop. Kupfuura izvozvo, ndinofunga kuti zvinhu zvinonakidza zvikuru zvinogona kuitwa nekugoverwa kwakawanda, kunyangwe ndichifunga kuti hazvisi chinhu chinowanikwa chero mushandisi "wekunze" uye zvinopesana nekuwedzera kwemahurongwa akatsigirwa naTux.
Pindura Klaus Schultz
Wolf Kurwisa akadaro
Ndine rakafanana desktop ndichishandisa Xfce: x
Pindura kuWolf Assault
Sheldon Cooper akadaro
Kubva pakuona kwangu ndinofunga kuti kutaridzika kwayo kwakafanana neWindows 7, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yakabudirira kwazvo mune izvo, iine Ubuntu pachayo mumatumbu ayo kana musimboti nezvose zvayo, zvisinei ini ndinofunga inogona kukonzeresa kupatsanuka zvinzvimbo mupfungwa yekuti kune rimwe divi kana ndichigona kukwezva kune vakajairika vashandisi veRedmond system, zvisinei kune rimwe divi, ingori imwezve inogadziriswa kubva kune inoonekwa interface inogona kuitwa nechero imwe distro, kunyanya ne zvichibva pane XFCE nharaunda, yeakasarudzika masimba ekumisikidza mukirasi yayo, saka zvimwe kubva pachinhu icho, iyi distro inongotambanudza rondedzero yemamwe ayo akagadzirwa nechinangwa chimwe chete sekuve semuenzaniso Zorin OS, zvakadaro uye Mukupfupisa, musimboti yeiyo GNU / Linus masisitimu anotungamira, kunova kupa vashandisi rusununguko rwekusarudza uye kushandisa kuve vasina rusarura mukupedzisa ongororo yangu. Nei ramangwana rekuparadzaniswa kwakadai.
Pindura kuna Sheldon Cooper
Chandinonyanya kufarira rusununguko rwekuita chero chinogoneka. Kune ese marudzi ese ezvido uye manakiro ... uye wadii kusaagutsa? Chimwe chinhu ndechekuti ine inomiririra kana kuti kwete ... ichaonekwa ... ndakayedza muViretualBox uye yaitaridzika kunge yakakwana.
Pane chero munhu anoziva zvinodaidzwa nemifananidzo iyi uye ndinozvirodha kupi?
Ini handizive kuti nei vachida kuti Linux iite kunge windows.
Nekuti vashandisi veMAC havanyepedze kuita kunge windows, uye kana mumaforamu mazhinji nemapeji e linux pane "rubatsiro" rwekuti ungaita sei kunge windows. nekuti hatina kana hunhu uye tinogamuchira kugoverwa kwavo sezvavari.
Nekuti hatisi kuzvisunungura pachedu zvachose.
Ernesto Manriquez Mendoza akadaro
Maitiro andinozviona, zviri pachena kuti hapana anofarira achaisa izvi. Windows 7 makanda uye masisitimu anotevedzera Windows 7 (kwete, hapana anoda kutevedzera Windows 8 kana 10) ane munhu mumwe chete anogamuchira: vashandisi veLinux vanoshamisika vanoda kugonesa maresitoreti ecyber uko macomputer neophytes anotarisira kuwana, haichisiri Internet Explorer, asi " nhandare ine bhuruu e iyo inoshanda kufamba munzira. "
Kana zviri izvo; zvakakwana. Zvese zvandakanga ndaona zvekuteedzera Windows zvaive zvakagovaniswa zvekare neI IceWM kana KDE 3 yakashongedzwa, saka izvi zvinopa makore mashoma mashoma mberi kune aya maLinux ekutanga.
Pindura kuna Ernesto Manriquez Mendoza
Ndanga ndichishandisa Linux kwemakore akati wandei ikozvino, imwe yeakanyanya hunhu hweiyo Linux system ndiko kugona kukuru kwekugadzirisa uye kugadzirisa kwehunhu hwayo.Ndakaedza ino chaiyo system uye inoita senge yakagadzikana, inewo imwe chirongwa emulators akazara uye anoshanda windows iyo yandakaedza.
Aesthetically inoda kuziva uye zvakare panogara paine mukana wekushandisa mamwe madingindira uye marongero asingayeuke iyo Windows nharaunda
Lorenzo Jimenez (@lorenzosjb) akadaro
Sei, kana Windows ichakurumidza kuunza Linux? lol
Pindura kuna Lorenzo Jiménez (@lorenzosjb)
Dzimwe nguva handinzwisise kuti vanhu vanogona kuvhiringidzika kana kukanganiswa pane desktop yeLinux. Ndeupi musiyano mukuru? Bhatani rekutanga?
Kana pasina zvishoma zvekuda kuzvidudzira, zvinogona kunzwisiswa, asi kunyangwe iwo mamamenyu akarairwa zvirinani muLinux pane muWindows, kubvira mapoka ekutanga mashandisiro nerudzi (girafu, Internet, hofisi, nezvimwewo) uye iyo wechipiri se «vari kudonha».
Ndinozviona zvakanaka kutambisa nguva pane vanhu vasingade kushandisa 2 masekondi vachidzidza kuti bhatani rekutanga riri munzvimbo imwechete seWindows chete iyo ine imwe "figurine" ...
Sentry void akadaro
VANOFANIRA GADZIRA CHINZVIMBO CHINOGONESA PAMUSORO PENYAYA KUTI IVE KUSHANDISWA PASINA CHINODIWA KUTI UYE KUTAURA MAMVIRI WEMAOKO KANA KUSHANDURA MASHOKO ANOSHANDISA ANOSHANDISWA NAYE
Pindura kune Sentry Void
Ndine makore makumi mashanu. Ndakaenda kumakomputa sainzi muVIC-50, uye ndakapfuura neOS izvo vamwe vasingatombozive (senge CP / M, sisitimu iyo IBM yanga yoda kusarudza ma processor ayo e20bit pachinzvimbo cheMS-DOS, sa final yakasarudzwa). Ndakave nemakomputa 16, 8086, 286… ekutanga asina dhisiki rakaomarara, ndakatakura MS-DOS pane 386 »floppy kutanga, kozoti 8 5/1, kozo 4 3/1. Iwo ekutanga windows pane matatu floppy disks, yaive graphical yekuwedzera yeMS-DOS; Ini ndaenda kuburikidza neshanduro 2, yekutanga ine mawindo akapindirana; 3, 2.03 (networking), 3.1, 3.11, 95; Ndakasvetuka vhezheni yakaita se98SE kana Millenium Edition kana 2000. Ndakaedza NT ndikagara neXP kwese kwandaigona kusvika ndisisina imwe sarudzo kunze kwekuenda kuna 98, ndiri kuzeza kusvetukira kuna 3002 kana 7. Uye zvese izvi kuuya ?
Zvakanaka, zvinouya kutaura kuti ini handina kungozvarwa zuro munyika ino, uye kunyangwe ndasvika Linux kanoverengeka (kekutanga zvakanditora vhiki nevhiki nezambuko kuti nditange, ini handiyeuke kuti ndeipi vhezheni pane desktop PC ) Handina kumbobvira ndainzwa kugadzikana zvakakwana kuti ndigaremo uye ndisiye Windows.
Iwe unotsanangurira vana vako vane makore masere negumi nerimwe ekuberekwa kuti iyo laptop mukamuri mavo ine ndimu peya system, zvirinani kupfuura iyo Windows shit iyo shamwari dzavo dzinayo iyo dzimwe nguva inoshanduka kuita bhuruu ... ivo vachikutarisa nechiso chisingazivikanwe uye iwe vanoratidza CD nemitambo yekudzidzisa iyo yavakauya nayo kubva kuraibhurari, uye kuti inoshanda pane shamwari dzavo 'Windows shit uye haishande kumba ... Hongu, ndinoziva, yeLinux kune zvakare, uye vanogona kunyangwe kuve nani, asi ane makore gumi nerimwe mukomana haadi kuve wepakutanga, anoda kuve AKAZVIMWE seshamwari dzake. Uye nditende, vabereki vane vana, vangangove vashandisi vePC, isu tiri mamirioni nemamirioni munyika.
Chii chatinacho izvozvi? Iyo OS iyo, iri Linux, inoratidzika kunge Windows uye pamusoro peiyo unogona kumhanyisa zvirongwa zvakagadzirwa zveWindows (zvimwe)? Zvakanaka, ini ndinonzwisisa kuti vakapindwa muropa neLinux havaifarire, hazvisekisi ... asi kana iyo pizza ichinhuwirira kunge Windows, inonaka seWindows uye inoita kunge Windows, ini handipe shungu kana mukanyiwa uri Linux. Uye pamusoro peizvozvo, zviri mahara uye zviri nyore kuisa! Izvi ndizvo chaizvo zvinogona kugonesa vazhinji, kusanganisira ini nevana vangu, kuchinjira kuLinux. Asi kana ikasataridzika kana kuravira kana kunhuwidza kunge Windows, inogona kunge iri Iranian caviar, chandiri kuda ipizza. Ndanga ndajaira kudya zvisina kudya ...
Kumhanyisa Kurota - Yakavhurika Sosi Yekumhanyisa Simulator
Geary 0.11, iyi ndiyo vhezheni nyowani yeGnome mail mutengi